कि’चकन्नि सँगको भेट – भिम राई «
कि’चकन्नि सँगको भेट – भिम राई
प्रकाशित मिति : 10 October, 2020 11:40 pm
गाउँको अति बि’पन्न परिवारमा मेरो जन्म भए थियो । बाबु र आमाले जिन्दगी भरि छोराको खोजि गर्ने हुदाँ क्रमश: हामी पाँच जना छोरीहरु जन्मेका थियौ । परिवारमा म भन्दा ठुली दिदी हुनु हुन्थ्यो र उहाँ पछिको म माहिली छोरी थिए । दिदी र मेरो उमेर चार बर्षको फरक थियो । दिदी अठार बर्ष पुग्ने बितिक्कै हलेशिको एक जना शिक्षक सँग उनको बिहे भयो ।
दिदीको बिहेको दिन गाउँ वरिपरिका मानिसहरु बोलाएर राङ्गो, खसि र बङ्गुर का’टेर गित गाउदै नाच्दै भोज खाएका अहिले सम्म मेरो मस्तिष्कमा ताजै थियो । उनको बिहेको दिन एक मनले खुशि थिए तर सधैको लागि बिदाई गर्नु पर्दा अति दु’खित पनि थिए ।
दिदीको बिहे भएको अर्को बर्ष म पनि उहाँको घर हलेशि पुगेकी थिए । उनको घरमा दुई दिन बस्दा हलेशि, महादेबस्थानको दर्शन गर्न पाएकोमा ज्यादै प्रशन्न मुद्रामा थिए । आफ्नो घर छाडेर बाहिर बास बसेको त्यो नै मेरो पहिलो चोटि थियो । दिदीको बिहे भएको दुई बर्ष पछि उनी गर्भवती भएकी खबर सुनेर हामी खुशि भएको थियौ । परिवारमा छोरो नजन्मेकोले सायद नाती जन्मने होला भनेर बाबु आमा हामी भन्दा झन धेरै खुशि हुनुहुन्थ्यो ।
अषाढ पन्ध्रको त्यस दिन सिम खेतमा धान रोपेर घर फर्केको थियौ । बङ्गालको खाँ’डी बाट उत्पन्न भएको मनसुनको कालो बादल छिप्तीको आकासमा रातभरि मडारि रहेको थियो । मनसुनले गर्दा राती पानी पर्नु र मेघ गर्जनु बराबरि भै रहेको थियो । हामी दिनभरि खेतमा काम गरेर ल’खत’रण परेको थियौ । त्यसैले बहिनीहरु सँग घर भित्र सबेरै सुतेका थियौ । अनि बाबु आमा चाँही सदा झै घरको तला माथि सुति रहनु भएको थियो ।
रातको समय त्यस्तै दुई बजेको हुनु पर्छ । अचानक मुल ढोका बाट मेरो नाम ‘मुना’ भन्ने अस्पष्ट आवाज मडारिदै मेरो कान सम्म आयो । भाते निन्द्रामा मिल्काएको एउटा बुढो ढिक्की झै मस्त सँग सुति रहेको थिए । कसैले मेरो नाम पुकारेको जस्तो आवाज सुनेर अलिकति चनाखो बने । केहि छिनमा दोश्रो चोटि ‘मुना’ भन्ने आवाज दोहरियो । त्यसरि दोहरिएर आएको आवाज दिदीको जस्तो लाग्यो । तर यस्तो रात बिचमा उनी कसरि आईन होली भन्ने सोचे । तै पनि ‘हजुर ! दिदी,’ भन्दै बिस्तारै उठे ।
घर भित्र निस्बन्द अध्याँ’रो थियो । हातले भित्ता छामछुम गर्दै मुल ढोका तिर लागे । अचानक मेरो स्वर सुनेर तला माथि बाट बाबुले ‘छोरी ! को हो ?’ भन्दै सोध्नु भयो । मैले उत्तर फर्काउन नपाउदै टर्चको सहायताले काठे भर्याङ बाट ढक ढक आवाज निकाल्दै मुनि तलामा झर्नु भयो ।
‘खै ! दिदीको जस्तै आवाज सुनेकी थिए ।’
त्यसपछि बाबुले एक्कै शब्द बोल्नु भएन । मैले मुल ढोकाको अगालोलाई बिस्तारै सारेर खोले । अनि हामी दुवैजना सँगसँगै बाहिर दलानमा निस्कियौ । रात भरि परेको पानी र मेघ गर्जन त्यति बेला रोकिएको थियो । त्यस्तो चकमन्न अँध्यारो रातमा टर्चको सहायताले आँगनको दायाँ बायाँ सबै तिर हेर्यौ तर हामीले केहि पनि देख्न सकेनौ । एक्कासि छिमेकिको पल्लो घरमा सानो बच्चा ङ्या’र ङ्या’र रोएको जस्तो आवाज सुनियो । तर त्यस घरमा कुनै बच्चाहरु थिएनन् । धेरै बर्ष अगाडि देखि ढाकिमे बजु एक्लै बस्दै आउनु भएको थियो ।
‘बाबु ! तपाईले पनि नानी रोएको आवाज सुन्नु भयो ?’ थोरै ड’राएर मलिन अनुहार बनाउदै मैले सोधे ।
मेरो प्रश्न सुनेर बाबुले मलाई एक झलक हेर्नु भयो । अनि टाउको हल्लाएर स्विकार गर्नु भयो । भ’यङ्क’र ठुलो रात बिचमा चरण बध्द तरिकाले हुने नहुने आवाज आएको सुनेर मैले केहि पनि बुझ्न सकेकी थिईन । घर मुनि बारिमा गाई भैसिको बर्षे गोठ थियो । सायद बस्तु फुस्कियो होला भनेर टर्चको सहायताले गोठ तिर हेर्यौ । अरु बेला मज्जाले सुत्ने बस्तुहरु त्यसबेला जर्याक जुरुक उठि रहेको देख्दा निश्चय नै केहि भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा आ’शं’का उत्पन्न भयो ।
छिप्तीमा औसीको सुनसान मेचक अँध्यारो रात थियो । का’लो बादलले पुरै ढाकेको आकास गँगामा एउटै ताराहरु देखिएका थिएनन् । चकमन्न अँध्यारो रातमा दम्कु जङ्गलमा घुर घुर रा’स बिरा’त बाघ घुरेको आवाज यदाकदा सुन्न सकिन्थ्यो । हाम्रो घर मुनि एउटा बुढो बढहरको रुख थियो । त्यस रुखमा हरेक रात हुचिलले बास बस्थ्यो । त्यसरात हु-हु हुचिलको न’रमाईलो आवाज हामीले क्रमश: सुनि रह्यौ । तर त्यस्तो शून्य रातमा हामीले केहि पनि देख्न सकेको थिएनौ । समय समयमा बिभिन्न प्रकारको आवाजहरु सुनेर बाबुले अनुहार मलिन बनाउदै मलाई हेरि रहनु भयो र मैले पनि उहाँलाई शँ’कालु दृष्टिले हेरि रहे ।
‘छोरी ! रा’त बिचमा हुचिलको त्यस्तो नरमाईलो आवाज अ’शूभको लक्षण हो ।’
बाबुले नि’यास्रो मान्दै त्यति बोल्नु भयो । मेरो उत्तरको प्रतिक्षा नगरि फेरि सुत्नको लागि तला माथि पस्नु भयो । घर बाहिर रहेको सौचालय प्रयोग गरेर म पनि सुत्न पसे ।
भोली बिहान उठेर धारामा पानी भर्न खेत जादै थिए । जिम्मावाल काका सँग बाटोमा अचानक भेट भयो । ‘मुना ! बिहानै रित्तो गाग्री देखाईस, खबर राम्रो छै’न् ?’ लामो सास तानेर दु’खित हुदै सानो स्वरमा काका बोल्नु भयो । हाम्रो गाउँमा जिम्मावाल काकाको घरमा मात्रै टेलिफोनको सुबिधा थियो । हलेशि बाट एका बिहानै भिनाज्यूले काकालाई फोन गर्नु भएको रहेछ । सोमबार देखी दिदीलाई बच्चा जन्माउने ब्य’थाले छोएछ । मङ्गलबार झन सा’र्हो सा’र्हो हुनु भएछ । बुधबारको बिहान दुई बजेतिर प्र’सू’तिज्व’रले आमा र बच्चा दुवैको मृ’त्यु भएको दु’खद खबर उहाँले सुनाउनु भयो ।
काकाको कुरो सुनेर त्यति बेला मेरा आँखा बाट बलिन्द्र आँ’सुका धारा बहि रह्यो । गत राती जुन समयमा दिदीले मलाई बोलाउदै गर्नु भएको आवाज सुनेको थिए । ठिक त्यँही समयमा उहाँको प्रा’ण गएको रहेछ । तर उहाँको हँश उडेर हाम्रो घरमा आएको हुनुपर्छ भन्ने मैले मनमनै त्यतिबेला अनुमान लगाए ।
सुन्दर भविश्यको कल्पना गर्दै गर्दै नाती जन्मने आशा अचानक नि’रासामा परिबर्तन भएकोले मेरो परिवार झन दु’खित बन्यो । दिदीको मृ’त्यु भएपछि अर्को बर्ष भेनाज्यूले उँभो खोला तिरको अर्कै केटी सँग बिहे गर्नु भएको खबर पनि हामीले सुन्यौ । दिदीको मृ’त्युले हाम्रो परिवारमा जति ठुलो क्ष’ति बनायो तर भिनाज्यू लाई केहि पनि बनाएन । किनभने मेरी प्यारी दिदी भन्दा कलिली युबती सँग उहाँले बिहे गर्ने फेरि अबसर पाउनु भयो । उहाँले देखाउनु भएको त्यस्तो स्वा’र्थी ब्याबहारले पुरुषहरु प्रति किन किन मलाई इ’र्ष्या जाग्न थाल्यो ।
मेरो माध्यमिक बिधालयको पढाई सकेपछि कलेज पढन जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल तर्फ गए । बजारको नजिकै एउटा सानो कोठा किरायामा लिएर बस्न थाले । मेरी आमाले समय समयमा केहि खानेकुरोहरु लिएर मलाई भेटनको लागि दिक्तेल आउने गर्नु हुन्थ्यो । मेरो त्यहाँ पढने बाहेक अन्य केहि काम थिएन त्यसैले छिप्तीमा भन्दा दिक्त्तेलमा धेरै रमाईलो जिन्दगी बिताई रहेको थिए । तर पटक पटक आमा दिक्त्तेल आउनु भएको बेला छोरी अब चाडै बिहे गर्नु पर्छ भन्नु हुन्यो । त्यो सुनेर मेरो मन घरि घरि बे’चै’न हुने गर्दथ्यो । किनभने राम्रो पढेर उज्वल भबिश्य निर्माण गर्ने मेरो आ’का’ङ्क्षा लाई आमाले न’ष्ट गर्न खोज्दै हुनु हुन्थ्यो ।
दिक्तेलको बसाई लगभग एक बर्ष बिति सकेको थियो । आमा बाबुले मेरो बिहेको बिषयमा जे सुकै भने पनि बिहेको कारणले दिदीको जीवनमा घटेको त्यस्तो अ’पृ’य घ’ट’ना सम्झदा मलाई तत्कालै बिहे गर्न रुचि थिएन । एक दिन शनिबारे हटिया भर्दै आमा दिक्त्तेल आउनु भयो । त्यसदिन आमाले म सँगै मेरो डेरामा बास बस्ने निधो गर्नु भयो । डेरामा बेलुकि मैले खाना बनाए अनि खाएर सुत्नको लागि तरखर गर्दै थियौ ।
‘छोरी ! पुष्पराजले तिमीलाई असाध्यै मन पराएको छ, अब बिहे गरौ है ?’ लामो समय सम्म मलाई हेरि रहेर अचानक आमाले मुख खोल्नु भयो ।
जमदार पुष्पराज पुर्व बेलायति सैनिक थिए । सैनिक बाट निबृत भएपछि उहाँले हाट डाँडामा एउटा ठुलो दोकान खोल्नु भएको थियो । खै कहाँ बाट घोडामा चढेर कुनै कुनै बेला दिक्तेल आउनु भएको मैले पनि उहाँलाई समय समयमा देखेकी थिए । तर त्यति ठुलो मानिस सँग मैले बोल्ने अबसर चाँही पाई हालेकी थिईन । तै पनि समय समयमा मात्र उहाँ दोकानमा आउने र जाने गर्नु हुन्थ्यो । उहाँको दोकानमा काम गर्ने मानिसहरु त्यस्तै छ-सात जना थिए होला ?
बेलुकि आमाको त्यस्तो कुरो सुनेर मलाई केहि बेर हासो उठ्यो । जिल्लाको नामुद धनाढ्य मानिस भनेर गनिए तापनि त्यति बुढो मान्छे सँग काँक्राको चिचिला जस्ती छोरी दिन खोज्ने आमाको बिचार कस्तो होला भनेर केहि बेर चि’न्ति’त बनि रहे ।
‘कोहि नपाएर त्यस्तो बुढो सँग के बिहे गर्थे ?’ धेरै बेर सोचेर आमालाई रु’खो जबाफ फर्काई दिए ।
त्यसपछि हामी सुत्नको लागि बिस्तारामा पस्यौ । तै पनि आमाले क्रमश: ब’कब’क गरि रहनु भयो । उहाँ सँग प्रशस्त सम्पति छन् जिल्लाको सबैभन्दा धनि मान्छे हुन । तिमी बाचिन्जेल जमादार्नी भएर बस्छौ अनि उहाँको मृ’त्यु पछि पनि बेलायति नि’बृ’तिभरण पाउछौ । हामी जस्तो बि’पन्न परिवारको लागि त्यो भन्दा अर्को बिकल्प के हुन सक्छ भन्दै भन्दै आमा बल्ल बल्ल सुति जानु भयो ।
दिक्त्तेलमा धेरै दिन, रात, हप्ता र महिना बित्दै गयो । घरमा धेरै छोरीहरु भएकोले आमा बाबुले कुनै पनि मुल्यमा छोरीहरुको चाँडो चाँडो बिहे गरि दिने योजना बनाई रहनु हुन्थो । उहाँहरुको कुरो सुनेर कुनै कुनै बेला हामी छोरी मान्छेको जिन्दगी प्रति घृ’णा उत्पन्न हुन्थ्यो । मैले बिहे गरिन भने बहिनीहरुको लागि बिहे गर्न असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ भनेर ज’ब्बरज’स्ति गरि रहनु भएको थियो । आमा बाबुको हृदय न’दु’खाउनको लागि मेरो समकालिन युबक सँग बिहे गर्ने रहर त्या’गेर आफु भन्दा बिस बर्ष जेठो जमदार सँग बिहे गर्न म राजी खुशि भए ।
हिलो मैलो र झरि लाई बिदाई गर्दै बर्षा गयो र हिउँदको मौसम आयो । प्रकृति पनि कति पा’पि’ष्ट हुन्छ, सबै सुखेर दिक्त्तेलको वरिपरि हरियो भन्ने चिज देखिन छाड्यो । त्यस्तो उ’जाड समयको एक दिन टेम्के बाट आएको सिरेटोले बिहानै देखि बजारलाई आ’क्र’मण गरि रहेको थियो । पाँच-छ जना मान्छेहरुको साथमा दुई वटा घोडाहरु लिएर जमदार साहेब म डेरा गरेर बसेको ठाउँ माटिकोरेमा मलाई लिन आई पुग्नु भयो । आखिर म जमदारको घर जाने नै भए भनेर हिजो बेलुकि नै सर समान तयार पारेकी थिए । जमदार आउने बितिक्कै उहाँको सहयोगि हरुले मलाई घोडामा चढन सहयोग गरे । जिन्दगीमा पहिलो चोटि घोडा चढदै थिए त्यसैले धेरै ड’र लागि रहेको थियो । घोडा चढेपछि अगि पछि एक एक जना सहयोगि हरुको साथमा मैले सदाको लागि माटिकोरे छाडे ।
जिन्दगी भरि पालेका असँख्या रहरहरु सँग सँगै कोहि बेला घोडा चढदै र कोहि बेला झर्दै म उहाँको घर लिलिमा पुगे । हामी उहाँको घरमा पुग्दा केहि मानिसहरुले हाम्रो प्रतिक्षा गरेर बसि रहेका थिए । त्यस दिन उहाँको घरमा सानो भोजको पनि ब्यबस्था रहेछ । हाम्रो स्वागतका लागि भेला भएका गाउलेहरुले सानो भोजको खाना खाए पछि सबै आ-आफ्ना घर तर्फ लागे ।
‘जमदार महल’ लिलिमाको प्रख्यात तीन धुरे महलमा बेहुली भएर पुगेको दिन तिनै घरमा काम गर्न सघाउने एक परिवार कान्छा र कान्छी सँग मेरो परिचय भयो । त्यस घरमा कान्छा राईले गाई, भैसि र घोडाको हेर चाह गर्ने गर्दथे भने कान्छी राईनीले घर भित्रको सम्पुर्ण कामहरु हेर्ने गर्दथिन । कान्छा कान्छीको त्यस दिनको कर्तब्य पुरा भएपछि बेलुकि बैठक कोठामा हामी चारै जना भेला भएको थियौ ।
कोठाको दुई छेउमा बलेको लालटिनको मधुरो प्रकाशले कोठालाई थोरै उज्यालो बनाएता पनि कोठा भित्रको बाताबरण एकदम सुनसान थियो । सुनसान समयलाई बिथोल्दै जमदार साहेब बोल्न थाल्नु भयो ।
‘कान्छी ! तीन गिलास र’क्सि लिएर आउ ?’
जमदार साहेबले बर्साएको हुकुम जमिनमा खस्न नपाउदै कान्छी भान्सा कोठामा एक लब्यले छाडेको तिर झै हानिएर गईन । मिलिक्कै तीन वटा गिलासमा भरि भरि र’क्सी पल्टने किस्तिमा राखेर हाजिर जनाईन । र’क्सि ल्याएर हामी तिनै जना बसि रहेको ठाउँ अगाडिको टेबलमा थपक थपक राखी दिईन । तीन वटा गिलासमा मात्रै र’क्सि ल्याएकी मैले देखेपछि उनले चाँही र’क्सि पिउदैनन् रहेछ भन्ने चाल पाई सकेकी थिए । मैले पनि त्यस उमेर सम्म मुखमा र’क्सि पारेकी थिईन ।
‘मुना ! अब देखि तिम्रो हेर बिचार कान्छीले गर्ने छिन ।’
थोरै र’क्सी मुखमा हालेर जमदार साहेबले कोठा थ’र्किने गरेर ठुलो स्वरमा बोल्नु भयो । उहाँको मुख बाट र’क्सि ल्याउनु भने पछिको दोश्रो चोटि निस्केको त्यो बाक्याशँहरु मैले सुनेको थिए । तर उहाँको भनाई सुनेर हस वा हुन्न केहि पनि भन्न सकी रहेकी थिईन । त्यसैले केहि नबोलि गजधम्म त्यतिक्कै बसि रहेको थिए । जमदारको अगाडि कसैले मुख नखोले पछि दोश्रो चोटि कोठाको बाताबरण शान्त र शुसिल बन्यो । त्यस्तो सुनसान बाताबरणमा कान्छा र कान्छीको हृदय बि’दारक गोठालो मुहारहरु लाई मैले पालै पालो नजर लगाई रहे । त्यसपछि, ‘अहिले सम्म र’क्सि पिएकी छैन ?’ सुस्तरि हिडदै कान्छीको कानै नजिक पुगे अनि बिना साईनो मेरा भनाई राखे ।
‘जमदार्नी साहेब ! बिहेको पहिलो रात हो, त्यति चाँही पिउनु होला ?’ उनले आदरता साथ मलाई अनुरोध गरिन ।
उनको अनुरोध सुनेर चुपचाप बसि रहे । केहि बेर पछि कान्छीले नै फेरि मुख खोलिन, ‘जमदार्नि साहेब अब तला माथि तिर जाउँ है ?’ भन्दै उनी मेरो अगाडि अगाडि बाटो लागिन । मैले र’क्सिको गिलास लाई नछोई त्यतिक्कै छाडि राखे । अनि बिरालो चालमा उनको पछि पछि लागे । तला माथि पुगेर भर्याङको दाहिने तिरको कोठा देखाउदै यो जमादार साहेबको सुत्ने कोठा हो, उनले सानो स्वरमा बताईन ।
घन्द्रङ्गै ढोका खोलेर कोठा भित्र पसिन र मलाई पनि भित्र बोलाईन । एउटा बिशाल कोठाको बिचौ बिच भागमा ठुलो पलङ थियो । पलङको दायाँ बायाँ दुई वटा ठुल्ठुला दराजहरु देखिन्थे । दराज सँग सँगै कोठाको एका पट्टि भित्तामा ‘प्वोईन्ट टु टु’ र अर्को भित्तामा ‘टुवेल्भ बोर’ राईफलहरु सजिएका थिए । तर ढोकाको शिरमा जमदार साहेबको जङ्गि पोशाकमा घोडा माथी राईफल समाति रहेको एउटा ठुलो तस्बिर थियो । कोठाका दायाँ बायाँ भित्तामा सजिएको राईफल र तस्बिरमा पनि राईफल देखिएकोले जमदार साहेब शि’कार खेल्न रुचाउनु हुने रहेछ जस्तो मनमनै लाग्यो ।
‘जमदार्नी साहेब ! यो दाहिने पट्टिको दराज चाँही तपाईको हो ।’ दराज खोलेर त्यहाँ भित्रका लुगा फाटाहरु देखाउदै मैनाको जस्ति सुरिलो स्वरमा उनी बोलिन । म प्रथम चोटि त्यस घरमा पाईताला टेक्दै थिए तै पनि मेरो लागि त्यति धेरै लुगाफाटाहरु किनि दिएर राखेको देखेर केहि बेर ट्वाल्ल परेर हेरि रहे । त्यसपछि कोठा सँगै जोडिएको सौचालय देखाउदै बोलिन । ‘हरेक बिहान तपाईहरु उठे पछि म आएर यो पलङ मिलाउछु । त्यसपछि सौ’चालय आफै सफा गर्छु त्यसैले हजुरले केहि पनि गर्नु पर्दैन है ?’ सम्म भनिन ।
म उनको कुरोहरु सुनेर कि’मक’र्तब्यबि’मुढ भै रहे । समय बेलुकिको दश बज्नै लागेको थियो । अब हजुर पनि सुत्नको लागि तयार हुनु होला ? केहि बेरमा जमदार साहेब सुत्न आउनु हुनेछ भन्दै म सँग बिदा भएर बाहिर निस्किन । उनले कोठा छाडे पछि नजिकै रहेको कुर्सिमा त्यति बु’ढो मानिस सँग मैले कसरि जिन्दगी कटाउने होला भनेर सोच्तै बसि रहे । केहि बेरमा घन्द्रङ्गै ढोका खुल्यो र जमदार साहेबको शरिर म तर्फ बढदै आयो । उहाँको उपस्थितले मलाई थोरै ड’र भयो तै पनि केहि नबोलि सरासर कपडा खोलेर सुत्न लाग्नु भयो ।
बिस बर्षकी भर भरकी उमेरमा जिन्दगीको पहिलो चोटी एउटा बु’ढो मर्द सँग एउटै बि’स्तारामा सँगै सुत्न भित्र भित्र आँट कस्दै थिए । त्यसैले मलाई हृदय भित्र बाट नै केहि हलचल पैदा भै रहेको थियो । उहाँ सुत्नु भएपछि, ‘मुना ! तिमी पनि सुत्ने होईन ?’ भन्दै छोटो प्रश्न गर्नु भयो ।
उहाँको भनाई सुनेर केहि हर्ष, उमङ्ग र त्रा’श सगँ सँगै बिस्तारै सिरक उचालेर सुत्न पसे । सिरक भित्र पसेको केहि बेरमा उहाँका उरन्ठेउला हातहरु बिस बर्षे शरिर भरि चल्न थाल्यो । ‘जे खोजेको थिईस, त्यहि पाईस,’ भन्दै महान अ’ज्ञानताका धनी बने र उहाँको सम्पुर्ण रहरहरु पुरा गर्न मेरो शरिरलाई खुला छाडि दिई रहे । बर्षौ अगाडि देखिको भो’का हातहरुले सुस्तरि सुस्तरि मेरो बस्त्रहरु बिदाई गरि पठाए । त्यसबेला एउटा बुढो मानबको न’ग्न श’रिर पनि त्यति रापिलो हुने रहेछ भन्ने मैले जिन्दगीमा पहिलो चोटि अनुभव गर्दै थिए ।
बेहुली भएर जमदार महल पुगेको पहिलो रात नै हामी दुई जनाको का’मो’तेजक शरिरहरु एक आपसका घ’मसान यु’ध्द बाट एक भएका थिए । मैले जिन्दगी भरि पालेको कु’मा’रीत्व तिनै बुढो मानिस लाई बिना दि’लच’श्पी समर्पण गरि दिए । भि’षण यो’ध्दाको जस्तो थ’कित, क्ला’न्त र शि’थिल उहाँको शरिरले केहि छिनमा नै खुत्रुक्कै पल्टेर निन्द्रा देवीको शरण लियो । तर मलाई चाँही त्यतिबेला मेरी दिदीको यादले केहि चि’न्ता र पि’डाको नजिकै पुर्याई रह्यो ।
कमल फुल जतिकै आरामदायी पलङ माथि आरामले सुति रहेको भएता पनि मलाई ति’खा फलामे का’ढा माथि सुते झै मेरो मनमा घो’चि रह्यो । किनभने हाम्रो त्यो ह’र्कतले अचानक ग’र्भ बस्यो भने मेरो पनि दिदीको जस्तै हालत हुन्छ होला भन्ने एका तिर ड’र भै रह्यो । यदि गर्भाधारण गरे भने आजैको दिन देखि मेरो पनि मृ’त्युको दिन गन्ति सुरु होला कि भनेर पुरै शरिर केहि बेर काँपि रह्यो ।
जमदार महल लिलिमामा कु’मारित्व न’ष्ट भएको पहिलो रात म निश्लोट निन्द्रामा थिए । अधिकतम बर्षाको कारण सम्पुर्ण महाबरे डाँडा नै बग्दै झरेको प’हिरोले हाम्रो छिप्तीको घर बगाएको सपना देखेर खन्द्रङ्गै झस्के । त्यस द’र्दनाक रातको बेला घर भित्र आमा, बाबु र मेरी प्यारी बहिनीहरु सुति रहेकै अबस्था थियो । दिदीलाई त पहिले नै बिदाई गरि सकेको थिए अब सबै परिवारको अन्त्य एक्कै चोटि भयो भन्ने ड’रमर्दो सपना देखेर म अतालिदै बिस्तारा बाट उठे । त्यसपछि ‘हे भगवान ! कस्तो सपना देखे ?’ भन्दै सिरक मिल्काएर पलङ बाट बाहिर निस्के ।
अचानक म झस्कदै उठेको जमदार साहेबले चाल पाउनु भयो । र सिरानि नजिकै राखेको टर्च बालेर मलाई हेर्नु भयो । टर्चको उज्यालो प्रकाशले एकजना निरभिमान मर्दको अगाडि न’ग्न अबस्थामा रहेको मेरो सुन्दर छाती टलल टल्कदै उहाँको नयनमा पर्यो । जीवनमा पहिलो चोटि ना’ङ्गो भु’ङ्गो भएर एकजना मर्त्य सँग सुति रहेकी थिए । तै पनि त्यतिबेला म ना’ङ्गै थिए भन्ने कुरो चाँही मैले बिर्सीएकी थिए । क’रुणामय मेरो अबस्था देखेर मलाई धेरै ला’ज र थोरै ड’रले एक्कै चोटि छोप्यो । त्यसैले हतार हतार बिस्तारा भित्र पसि हाले ।
भोलि बेलुकि हाम्रो कोठामा अलिक चाँडै पुगेको थिए । कोठामा पस्ने बितिक्कै एक्कासि कालो बर्कि ओढेर सौचालय तिर फर्कि रहेकी एउटी बुढि आईमाई मान्छेको जस्तो मैले आकृति देखे । उनी सौचालय तिर फर्कि रहेकी भए पनि बङलङ्गै छाडेकी लामो लामो केसरासि लाई मैले पिछाडि बाट राम्ररि नियालेर हेरे । तर उनी एक्कै छिनमा बिस्तारै हिडदै हिडदै सौचालय भित्र पसिन र त्यतै बिलय भईन । उनलाई त्यस्तो अबस्थामा देखेपछि म मुनि तलामा झरेर कान्छी लाई बताए । जमदार्नी साहेब घरमा त्यस्तो देखियो भने केहि असुभ हुन सक्छ सम्म उनले भनिन ।
बिहे गरेर त्यस महलमा पुगे पछि केहि पनि काम नगर्नु है भन्ने मैले आदेश पाएको थिए । त्यसैले तिनै आदेशलाई पालन गर्दै केहि नगरि चुपचाप बसि रहेको हुन्थे । दिउसोको खाना खाएर बार्दलिमा बसेर बगैचाको वरिपरि पहेलपुर पाकेका लटरम्म सुन्तलाहरुको रमाईलो दृश्य हेरि रहे । सुन्तला बगैचाको छेउ छाउ तिर सयकडौ बर्ष पुराना ठुल्ठुला सल्ला र सखुवाका रुखहरुले छाडेका अक्सिजन मज्जाले लिए । तिनै प्रकृतिको आकर्षक छाति माथि मन्त्रमुग्ध भएर डुबि रहेको बेला मेरो नजिकै जमदार महलका दुई वटा कुकुरहरु खेल्न आई पुग्यो । मलाई त्यतिबेला हाम्रो घरको खैरे कुकुरको यादले खुबै सताई रह्यो ।
काला पथ्थर बाट हिउ पग्लेर अबिरल बहि रहने स्वच्छ पानीको सुनकोशी नदीको सिधा माथि डाँडामा जमदार महल अबस्थित थियो । त्यँही बाट तल सुनकोशी र साप्सु नदीको सँगमलाई मैले धेरै लामो समय सम्म हेरि रहेको हुन्थे । तिनै नदीहरुको सँगम स्थलको दाहिने तिर उकालो बढदै बढदै क्षितिज सँग ठोकिएको उजाड भुमी मुलडाँडा देखिन्थ्यो । तिनै पङ्खर मुलडाँडामा धागोको धर्सो जस्तो नाख ठोकिने एउटा ठाडो गोरेटो थियो । तिनै गोरेटोमा लामो समय सम्म हिडि रह्यो भने मेरी माईती गाउँ छिप्ती सम्म पुर्याउदथ्यो ।
त्यस बेलुकि पनि वा हिजोको जस्तै आकृति देखा पर्ने होकी भनेर डराउदै डराउदै म कोठा भित्र पसे । कोठा भित्र पस्ने बितिक्कै मैले हिजो देखेको ठाउँमा आज फेरि उनलाई दोश्रो दिन पनि देखे । आज पनि हिजोको जस्तै उनको अनुहार सौचालय तिर फर्कि रहेको थियो । तर थोरै फरक चाँही उनको दाहिने हातमा एउटा लामो छुरि देखिन्थ्यो । मैले दोश्रो चोटि देखेकीले हिजो भन्दा अलिक सम्यम हुदै –
‘तिमी को हौ ? र मेरो कोठामा किन आयौ ? उनलाई ड’राउदै ड’राउदै मैले सोधे ।
‘यो मेरो कोठालाई तिम्रो कसरि भयो ? ख’बरदार ! यो कोठामा तिम्रो हैकम चल्ने वाला छैन ? तिमी जति जति मेरो नजिक आउछौ, मृत्युको नजिक पुग्छौ ।’
म भन्दा अझ उनी चर्को स्वरमा बोलिन । मृत्युको चेतावनि मुलक त्यस्तो भनाई सुनेर मेरो टाउको फुलिएर आयो । मेरा खुट्टाहरु थरर कापे र कोठामा ‘कान्छी’ भनेर बेस्सरि चिच्याए । म अतालिदै चिच्याएको सुनेर जमदार साहेब दगुर्दै तला माथि आउनु भयो । उहाँ कोठा भित्र पस्नु र म कोठा बाट बाहिर निस्कनु एउटै समय भयो ।
म दगुर्दै मुनि तलामा झरे । भान्सा कोठामा पुगेर कान्छी लाई यथार्थ कुरो बताए । कान्छीले मेरो कुरो सुनि सकेपछि उनी बोल्न थालिन ।
आज भन्दा तीन साल पहिले शाकेला पर्ब मनाउन कान्छा र म एक हप्ता हाम्रो गाउँको घर चुईचुम्मा गएको थियौ । घरमा जमदार साहेब र ठुली जमदार्नी साहेब मात्रै हुनु हुन्थ्यो । हामी फर्केर आउदा ठुली जमदार्नी साहेबको अचानक मृत्यु भएको हामीले थाहा पायौ । उहाँको मृत्यु भएपछि घरमा पटक पटक तर्साएर हामीलाई दुख दिई रहनु भयो । जमदार साहेबले चुईचुम्माको प्रख्यात किराती बिजुवा धामी बसाएर उहाँको चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नु भएको थियो । उहाँको मृत्यु सँग त्यति बेला सम्म पनि ठुली जमदार्नी साहेब पटक्कै खुशि छैन भनेर बिजुवाले भनेका थिए ।
‘अनि के भएर उहाँको मृ’त्यु भएको थियो ?’ असाध्यै धेरै ड’राई रहेकी थिए र थोरै सशँकित हुदै मैले प्रश्न गरे ।
‘खै ! त्यो त आजसम्म कसैलाई पनि केहि थाहा छैन । तर उनको मृत्यु भएको बेला ड्याम ड्याम आवाज गरेर दुई चोटि राईफल पडकेको टुक्रे खोला पारीको गाउँ टेम्मा सम्म पनि सुनिएको थियो रे । म यतिका बर्ष सम्म यँही घरमा बसेको छु तर मैले आजसम्म उनलाई देखेकी पनि छैन । आ….जे सुकै होस आखिर उनी मरेर पनि गई हालिन र सायद किचकन्नि भै सकिन होली ? त्यसैले सानी जमदार्नी साहेब ! अब केहि हुने वाला छैन ।’
सन् २००४ मा स्थापना भएको ‘किरांत राई यायोक्खा बेलायत’ खुट्टा लरबराउँदै १६ वर्षको जवानीमा
‘जनगणना–२०७८’ मा खसहरुको सुल्टो बाटोमा, राईहरुको उ’ल्टो बाटो हिड्दै
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’ । हालै एक अनलाइन न्युज पोर्टलमा आएको समाचारअनुसार आगामी १२ औं राष्ट्रिय
बेलायतको किरात राई यायोक्खा वि’वाद राष्ट्र राई स्पष्ट बिचार
लण्डन । किरात राई यायोक्खा बेलायतको वि’वाद सतहमा आएको छ । वि’वादले तनावको अवस्था ल्याउँदै
मार्क्सवाद भर्सेज सं’शोधनवा’द : – राजन तिमल्सिना
प्रगतिशील विचारधारा मान्ने मानिसहरुले प्रकृति, मानव समाज, सामाजिक क्रियाकलापका र सामाजिक शक्तिहरुको विश्लेषण मार्क्सवादको
भावना पञ्चकोशी होटेलबाट चार जना रेडपाण्डाको छालासहित प’क्राउ
दु’र्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको छालासहित चार जना प’क्राउ परेका छन्। प’क्राउ पर्नेमा नौमुले गाउँपालिका–२ दैलेखका २६
सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ धनगढीको घ’टना :नेपाल सुशासन अभियान
नेपाल सुशासन अभियानले धनगढीमा भएको प्रहरीको ह’त्या प्रकरणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। बुधबार अभियानले
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक डा.तारामणि राईले ‘राई–लिम्बु किरात होइनन्’ भन्ने तर्क गर्ने संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ र